Midowga Yurub oo uga digay Britain adeegyada maaliyadeed ee ka baxsan heshiiska ganacsiga - Horn Future
London(Reuters)-Diblomaasiyiin ayaa sheegay in madaxda Midowga Yurub ay xasuusinayaan Britain in aynan dhici karin inay damacdo in lagu daro waaxda adeegyada maaliyadeed ee Britain in ay qayb ka noqdaan heshiiska ganacsiga ee xorta ah ee la doonayo in uu dhexmaro kadib marka ay ka baxdo Ururkan.
France iyo dalalka kale ayaa xaqiijiyay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay maanta oo Isniin magaalada London oo ah xarunta ugu weyn ee dhaqaale ee Yurub in aynan awoodi karin Britain inay ka faa’iideysato suuqa Midowga Yurub haddii ay oggollaan waydo in la sii joogteeyo xeerka iyo kormeerka Yurub.
Raysal wasaaraha Britain Theresa May ayaa xadiday adeegyada baananka iyo adeegyada kale ee maaliyadeed inay qayb ka tahay mudnaanta ay siinayso heshiisyada ganacsi ee mustaqbalka ay la yeelan doonto Midowga Yurub kadib marka Britain ay ka baxdo Midowgan.
Theresa May ayaa waxa ay furi doontaa wadahadalo ay la yeelato Midowga Yurub bisha June ee soo socota, haddii ay ku guuleystay doorashooyinka laga soo hor’mariyay wakhtigooga.
Diblomaasi reer Yurub ayaa sheegay in madaxda dalalka 27 ee Midowga Yurub aynan u ahayn lagama maarmaan inay falanqayn doonaan adeegyada maaliyadeed ee heshiiska ganacsiga xorta ah sida ay filayso Theresa May.
Waxa la filayaa in madaxda Midowgan ay taageeraan shirka dhici doonaa maalinta Sabtida heshiisyo qabyo ah oo cusub oo ah faahfaahin ballaadhan oo uu soo diyaariyay Michel Barnier oo ah mas’uulka u qaabilsan Midowga ka bixitaanlka Britain ee Midowga kadib marka ay dib u eegaan wasiirrada arrimaha dibadda maalinta Khamiista.
« Qaramada Midoobay oo marmarsiiyo u yeeshay fariin hambalyo ah oo ay u dirtay dilaaga Asad	» The Guardian:Egypt’s dictatorship:a war of Sisi’s own making